Nanamafy ny mpitandro ny filaminana : « Voarara ny famoriam-bahoaka rahampitso » -
AccueilRaharaham-pirenenaNanamafy ny mpitandro ny filaminana : « Voarara ny famoriam-bahoaka rahampitso »
28/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hotanterahina rahampitso ny fankalazana ny faha-70 taona, hahatsiarovana ny tolona nataon’ireo mahery fo, tamin’ny 29 Martsa 1947. Nisy noho izany ny fepetra maromaro napetraka mba hampizotra izany an-tsakany sy an-davany. Nohamafisin’ny teo anivon’ny prefektioran’ny polisy fa voarara tanteraka ny famoriam-bahoaka, na ny filaharana an-dalambe , miaraka amin’ny fampiasana fanamafisam-peo izay midika ho fanentanana ho an’ny andron’ny rahampitso . Noho izany, dia tsy misy olona nahazo fahafahana hampiasa arabe na ampahany io, na manontolo. Natao izany mba hialana amin’ny fitohanan’ny fiara sy hampilamina ny eo amin’ny lafin’ny fifamoivoizana mandritra ity fankalazana ity. Antony iray nandraisana io fanapahan-kevitra io ihany koa ny tsy hiverenan’ny korontana, toa ny niseho tamin’ny taon-dasa. Tsy tokony hisy toraka izay ny kabary politika eny amin’ny arabe na any amin’ny toerana hafa heverin’ny sasany hanaovana izany, satria mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka izany, fa ihany koa mety hisy ireo mpanararotra mety hiteraka savorovoro.
“Fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra ireo maty ho an’ny tanindrazana tamin’ny 29 Martsa 1947 io andro io.Noho izany, dia tokony hizotra am-pilaminana sy ao anatin’ny fanajana tanteraka ireo mahery fo ho an’ny firenena , io andro rahampitso io. Tsy maintsy noraisina ireo fepetra ho an’ireo izay mety hitarika korontana , hisorohana izay mety hisian’ny andian’olona hanao zavatra tsy mifanandrify amin’izany fankalazana izany”, hoy ny fanazavan’ireo mpitandro ny filaminana avy ao amin’ny polisim-pirenena sy ny zandarimariam-pirenena. Tsy tokony hisy zavatra hafa hiseho ankoatra ny fametraham-boninkazo, eny Ambohijatovo sy eny Mausolée eny Ambohitsaina , amin’io fotoana io, hoy hatrany izy ireo. Nametraka lamina ihany koa ny kaomisionina mikarakara ny fahatsiarovana ny fankalazana ity andron’ny 29 Marsa ity. Notapahan’izy ireo tamin’izany fa ny fitondram-panjakana no mitarika ny hetsika. izany hoe , izy ireo no mametraka ny fehezam-boninkazo voalohany any amin’ireo toerana voakasika amin’izany vao manatanteraka ny azy ny antokon’olona sy ny olon-tsotra tsirairay avy. Voakasika amin’ity fepetra napetraka ity ihany koa ny any amin’ny faritr’i Vakinankaratra, Itasy ary Bongolava. “Izahay dia manentana ary mangataka ny rehetra mba hanaraka ireo fepetra ireo, mba ho tombontsoa iombonana, izany hoe ny filaminana”, hoy ny mpitandro filaminana namarana ny teniny.
Tontosa soa aman-tsara ny Fihaonambem-paritry ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara na ny HVM tao Toliara, ny 16 sy 17 jona teo. Araka izany, maro ireo zavatra nivoitra nandritra io roa andron’ny fikaonan-doha io. ...Tohiny